Waqtiga Akhrinta: 3 daqiiqo Mararka qaar erayga carqalad ayaa leh macno taban. Ma aaminsani in suuq geynta dijitaalka maanta ay carqaladeynayso tiknoolajiyad casri ah, waxaan aaminsanahay in lagu sii wanaajiyay. Suuqleyda la qabsiga iyo qaadashada teknoolojiyada cusub waxay awoodaan inay shaqsiyeeyaan, galaan, lana xiriiraan rajadooda iyo macaamiishooda siyaabo badan oo macno leh. Dufcadii iyo maalmihii qaraxu way gadaasheen gadaasheena maaddaama nidaamyadu ay ku fiicnaadeen beegsiga iyo saadaalinta dhaqanka macaamiisha iyo ganacsiyada.
Saturday, April 7, 2018 Talaado, Janaayo 22, 2019 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 4 daqiiqo Toddobaad ama ka hor ayaa la i weydiistey in aan ka hadlo munaasabad gobol oo ka dhacday Internetka Waxyaabaha. Aniga oo ah martigeliyaha barnaamijka 'Podcast' ee 'Dell Luminaries Podcast', waxaan lahaa tan badan oo u soo jiidanaysa xisaabinta Edge iyo hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed ee durba qaabaysa. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadiso fursado suuqgeyn ah oo ku saabsan IoT, waxaa jira si daacadnimo ah oo aan looga wada hadlin khadka tooska ah. Xaqiiqdii, waan ka xumahay maadaama IoT ay beddeli doonto xiriirka ka dhexeeya
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Tirada qalabka ku xiran internetka ee ku jira gurigeyga iyo xafiiskeyga ayaa sii kordhaya bil kasta. Dhammaan walxaha aan hadda haysanno waxay leeyihiin ujeedo si caddaalad ah u muuqata - sida kontaroolada iftiinka, amarrada codka, iyo heerkulbeegyada barnaamijka lagu baran karo Si kastaba ha noqotee, sii socoshada yareynta tikniyoolajiyadda iyo isku xirnaantooda waxay keeneysaa carqaladeyn ganacsi sida aynaan waligeen horay u arag. Dhawaan, waxaa la ii diray nuqul ah Internetka Waxyaabaha: Digitize or Die: Beddel ururkaaga. Isku duub
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Waxaan dhowaan la wadaagnay tusaalooyin ah sida Enterprise IoT (Internetka Waxyaabaha) ay saameyn weyn ku yeelan karto iibka dukaamada tafaariiqda. Wiilkaygu wuxuu ila wadaagayay sheeko warkeed tafaariiqda oo tilmaamaysa tirokoobyo si xun u xun oo la xidhiidha furitaanka iyo xidhitaanka dukaamada tafaariiqda. In kasta oo farqiga u dhexeeya xiritaanku uu sii kordhayo, haddana waxaa muhiim ah in la aqoonsado in waddankan uu sii wado furitaanka goobo badan oo tafaariiq ah. Xitaa Amazon, waxa loogu yeero tafaariiqda
Khamiista, Noofembar 16, 2017 Axad, Nofeembar, 19, 2017 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 2 daqiiqo Amaahiyeyaashu waxay taageerayaan maalgelinta warshad tafaariiqeed oo markii horeba xanuunsatay. Bloomberg xitaa waxay saadaalineysaa in Tafaariiqda Tafaariiqda ay dhaqso noogu dhici karto. Warshadaha tafaariiqda ayaa u bakhtiyaya hal-abuurnimo, iyo Internetka Waxyaabaha kaliya ayaa laga yaabaa inay bixiyaan kobcinta loo baahan yahay. Xaqiiqdii, 72% tafaariiqleyda ayaa hadda ku howlan mashaariicda Enterprise Internet of Waxyaabaha (EIoT). Kala badh tafaariiqleyda ayaa durba ku daraya tikniyoolajiyadda u dhow suuqgeynta. Waa maxay EIoT? In shirkadaha maanta, sii kordhaya